Ka shaqaynta wadanka Finland
/ Working in Finland / Other languages / Ka shaqaynta wadanka Finland
Liis xasuusin ah oo ku socda dadka markii ugu horeeysay Finland inay ka shaqeeyaan u yimid
Ku biir kana mid noqo ururada iskaashitooyinka shaqaalaha Shaqada Dhib ma kaa haystaa shaqo bixiyahaaga? Warbixino xirfad-xirfad u qoran oo shaqada ka hadlaya iyo ururada iskaashatooyinka shaqaalaha Usoo guuritaanka Finland Linkiyo kale oo faa'ido u leh dadka Finland inay ka shaqaystaan u yimid
Ku biir kana mid noqo ururada iskaashitooyinka shaqaalaha
Markaad Finland shaqo u timaado, ku biir kana mid noqo ururada iskaashitooyinka shaqaalaha. Finland shaqaaluhu intooda badan waxay ku jiraan oo xubin ka yihiin urur shaqaale oo xirfaddooda ah.
Ururada iskaashitooyinka shaqaalahu waxay kaa caawinayaan, haddii aad dhibaato kala kulanto shaqo bixiyahaaga, waxaana ay kala hadlayaan oo kala tashanayaan shuruudaha shaqadaada ku saabsan iyagoo ku matalaya adiga. Ururada iskaashitooyinka shaqaalaha qofka ku biira ee xubinta ka ahi wuxuu sidoo kale ka mid yahay khasnaddooda baagamuuda, taas oo kuu sugaysa inay ku siiso lacagta baagamuuda oo ah mid lagu saleeyey mushaharkaagi, haddii ay shaqo la'aani kugu dhacdo.
Finland ururada iskaashitooyinka shaqaalaha daladdooda la yiraahdo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK boggeeda Liitot.fi wuxuu kaa caawinayaa in aad hesho urur shaqaale oo kugu haboon adiga.
Liitot.fi (wuxuu ku qoran yahay afka finnishk)
Tradeunion.fi (wuxuu ku qoran yahay afka ingiriiska)
Sharciga daganaanshaha Finland iyo inaad ka shaqayso wadankan sharciga lagaaga baahan yahay waxaad ka helaysaa booska hoose ee ay ku qoran tahay Usoo guuritaanka Finland.
Shaqo raadinta waxaa kaa caawinaya xafiiska shaqada- iyo tabtaa nolosha loo la soo baxo ee (TE-toimisto) meel kasta oo uu Finland kaga yaalo oo dhan. Goobaha shaqada intooda badan waxaa lagaaga baahan yahay inaad afka finnisha ugu yaraan isku dabiri kartid.
Xafiiska shaqada - iyo tabtaa nolosha loola soo baxo (wuxuu ku qoran yahay afka finnishka)
Xafiiska shaqada - iyo tabtaa nolosha loola soo baxo (wuxuu ku qoran yahay afka ingiriiska)
Shaqada iyo shariikad samaynta (wuxuu ku qoran yahay afka finnishka iyo ingiriiska)
Markaad shaqo hesho, la samayso heshiis oo la gal shaqo bixiyahaaga. Heshiiska afka ama hadalka ahi waa ansax ku qabanaya, laakiin in waraaq lagu kala qorto ayaa had iyo jeer haboon. Sababta oo ah haddii hadhow la is qabto waxaa kuu fududaanaaysaa inaad keensato caddayn ku saabsan wixii biloowgii hore lagu heshiiyey.
Iska hubi inta aadan heshiiska saxiixin ka hor, inay ku qoran yihiin ugu yaraan oo lagu heshiiyey arimahan soo socda:
Labada dhinac ee heshiiska gelaya:
Qofka shaqaalaha ah iyo shaqo bixiyaha magacyadooda iyo magaalada ay degen yihiin
Wakhtiga tijaabada shaqada iyo muddada uu soconayo:
Wakhtiga tijaabada shaqada waxaa ujeedada laga lee yahay ay tahay in labada dhinacba ay ka fekeraan in heshiiska la galay yahay mid u dhigma heshiiskii shaqada lagu galay oo yahay sidii laga rabay. Mudada ugu dheer ee wakhtiga tijaabada ah lagu heshiiyaana sida caadiga ah waa lix billood. Mudada tijaabada lagu jiro labada dhinacba shaqaalaha iyo shaqo bixiyihuba guud ahaan waxay awood u lee yihiin in ay heshiiska ka baxaan, iyadoo aysan meesha imaanayn mudadii shaqo ka tagida ahayd.
Shaqadu ma mid joogto ah baa ("shaqo ilaa iyo intii mudo ah socanaysa baa") mise waa mid ku meel gaar ah mise waa tababar shaqo ah
Heshiiska waa in sidoo kale lagu qoro haddii ay shaqadu tahay mid kumeel gaar ah, maxay tahay sababta ay kumeel gaar u tahay
Wakhtiga shaqada la bilaabayo iyo wakhtiga shaqada ku meel gaadhka ahi ku eg tahay waa in heshiiska lagu qoro
Meesha shaqada lagu qabanayo
Shaqada la qabanayaa waxa ay tahay iyo tayadeeda
Mushaharka iyo wixii kale oo faa'ido caadiya ah iyo waliba xiliga mushaharka la bixinato:
Mushaharku inta uu noqonayo marka la qararayo waxaa la raacayaa heshiisyada shuruudaha shaqada mushaharooyinka ku qoran ee xirfadaan loo jaray, waana in uusan ka yaraan inta ku qoran heshiisyada shuuradaha shaqada inta lagu heshiiyey ee ku qoran ee dawladdu ay u jaangooysay. Xasuusnow, in Finland xataa maalmaha aad jiran tahay aad mushahar lee dahay oo lacagtaadi kuu soconayso.
Shaqo wakhtiga oo dhan ah oo fuul ah waxaa Finland loola jeedaa shan maalmood todobaadkii inaad shaqayso, maalintii qiyaastii sideed saacadood oo shaqo ah. Shaqooyinka iyagu shiftiga ah ama kaltanka wakhtigoodu waa mid is bad-badala, laakiin waa in ay celcelis ahaan noqdaan kuwo waafaqsan xirfadaas ama shaqadaas shuruudaha heshiiska shaqo ahaan lagu qoray ee dawladdu u qoondaysay.
Saacadaha shaqo ee dheeraadka ah iyo sidoo kale shaqooyinka galabtii iyo dabayaaqada todobaadka la qabto iyaga waxaa lagu bixiyaa Finland gundhooyin gaar ah.
Haddii aad gashay heshiis shaqo oo gelin ah ama nus, waa in aad ka taxadartaa in ay noloshaada kaafiyi karto oo dhaqaalaha ahaan waxa aad ka heshaa kugu filan yihiin. Haddii ay suurtogal tahay, ha saxiixin heshiis shaqo oo ay ku qoran tahay in saacadahaaga shaqadu is bad-badalayaan todobaad kasta oo noqonayaa eber ilaa iyo cadad saacado ah oo la cayimay. Oo ay dhici karto in todobaadyada qaarkood aan wax shaqo ah lagugu qorin haba yaraatee oo aad eber ku soo dhacdo.
Heshiiska shaqada ururadu shuruudaha ay u sameeyeen heshiiska shaqo ee ku salaysan waa sidan
Wakhtiga ka tegista shaqada ama ruqsada:
Wakhtiga ka ruqsayshasada shaqadu waa mid xiraya oo qabanaya shaqaalaha iyo shaqo-bixiyaha. Wakhtiga tijaabada ahi marka uu dhamaado qofna si toos ah la isagama ruqsayn karo oo shaqada lagama cayrin karo. Shaqo-bixiyuhu waa in uu had iyo jeer uu yahay marka uu qof ruqsaynayo mid aan dheel-dheelayn oo sabab culus u haysta ruqsaynta.
Shaqo-bixiyuhu ma ruqsayn karo qof shaqaale ah oo uu la galay heshiis mudo cayiman soconaya ilaa mudadii laga gaaro. Qofka shaqaalaha ahi isna shaqada kama tagi karo iyada oo aan mudadii cayinayd ee heshiiska ku qornayd aysan dhamaanin, laakiin badanaa arintan wada hadal ayaa laga yeelan karaa oo dhexdoodaa ayeey ka wada xaajoon karaan shaqeeyaha iyo loo shaqeeyuhu.
Finland malaha mushahar go'an oo la oran karo waa inta ugu yar ee la qaato oo sharcigu qabo, ee waxaa mushaharooyinka lagu qeexay heshiiska shuruudaha shaqada ee ay ururadu wada galeen oo u dhigan xirfad kasta oo shaqo gaarkeeda. Heshiiska shuruudaha shaqada ee ay ururadu wada galeen mushaharooyinka darajo ahaan lagu tibaaxay waa in la raaco oo lagu dabakho dhamaan shaqaalaha isku xirfadda ah, xataa shariikadaha qalaad ee dibada Finland uga soo dirsada shaqaale kumeel gaar ah waxaa lagu dabakhayaa heshiiskaas, sidoo kale waxaa lagu dabakhayaa heshiiska ee uu khusaynayaa shaqaalaha laga soo kiraysto dibadda ee ajaanibta ah.
Heshiiska shuruudaha shaqada ee ay ururadu wada galeen waxaa iyana lagu qeexay oo ku yaal arimo kale oo shaqada u ah shuruudo ay tahay in ugu yaraan la fuliyo oo lagu heshiiyo. Hal qof oo shaqaale ah keligiis looma baahna inuu ka qayb qaato heshiiska shuruudaha shaqada ee ay ururadu wada galayaan wada xaajoodyadiisa, ee waxaa heshiiskaa shuruudaha shaqo loo dhigayo wada gala ururada shaqaalaha iyo ururada shaqo-bixiyeyaalka dhexdooda.
Mushaharka waxaa sida caadiga ah lagu shubaa akoon bangi. Kaash lacag cad ah oo gacanta la iska siiyo cidna lagulama taliyo, sababta oo ah in qaabkaas la isticmaalo waxaa badanaa macnaheedu yahay in aan mushaharka laga jarin dhammaan lacagaha sharcigu qabo in laga jaro.
Markaad akoonto bangi furanayso, waxaad u baahan tahay baasaboor ama wuxuun aqoonsi shakhsiyadeed oo dawliya ah. Furashada akoonto bangi waxay kuu sahlanaanaysaa, haddii aad haysatid ama lee dahay ama nambarka aqoonsiga shakhsi ee qofka ee finnishka diiwaan nambarka u ah.
Hawlo-maalmeedka nolosha (wuxuu ku qoran yahay afka finnishka iyo ingiriiska iyo af soomaali)
Lacagaha mushaharka laga jaro
Marka aad hesho warqadda rasiidka ah ee mushaharkaaga ee ugu horaysa, eeg in mushaharkaaga is wata oo dhamaystiran laga jaray cashuurta sharciga waafaqsan iyo lacagaha damaanada bulshada loo jaro:
Cashuurta lacagta ah ee hormariska loo goosto:
Boqolkiiba inta lacag hormarin ahaan cashuur kaaga go'aysaa waxay ku qoran tahay kaarkaaga cashuurta, kaarkaas ama warqadda cashuurta oo aad ka heshay xafiiska cashuuraadka. Kaadhka canshuurta markaad dalbanayso waxaad u baahan tahay inaad lee dahay ama haysato nambarka aqoonsiga shakhsi ee qofka ee finnishka diiwaan nambarka u ah. Kaarka cashuurta waa in isla markaba aad u dhiibto oo siiso shaqo-bixiyahaaga shaqada marka aad bilaabayso.
Qofka shaqeeya lacagaha hawlgabka ee uu bixiyo:
Markaad Finland ka shaqaynayso, waxaa kuu ururaya hawlgabka shaqada wax loo yaqaan. Shaqo-bixiyahaaga ayaa ka jaraya mushaharkaaga lacagta hawlgabnimada. Haddii aan lagaa jarin oo la iska dhaafo waa denbi.
Damaanadda shaqo-gabka lacagaha loo goosto:
Sidoo kale ururka shaqaale ee aad ku biirtay wuxuu kaa rabaa lacag xubinimo ah, lacagtaas oo si toos ah shaqo-bixiyahaagu uga jarayo mushaharkaaga, waa haddii aad sidaas kula heshiisay shaqo-bixyahay inuu toos kaaga jaro. Adiga laftigaagu ayaa lacagta xubinnimada iskaashatada shaqaalaha sidoo kale toos ugu shubi kara iskaashatada aad ka tirsan tahay. Gebi ahaana lacagta xubinnimadu inta ay le'eg tahay waxay ku xiran tahay iskaashatada aad ku jirto waana 1-2 yuuro boqolkiiba oo mushaharkaaga oo is wata ka go'aysa.
Hay'adda cashuuraha (afka finnishka ayuu ku qoran yahay)
Hay'adda cashuuraha (afka ingiriiska ayuu ku qoran yahay)
Nidaamka hawlgabka ee Finland (afka finnishka ayuu ku qoran yahay)
Finnish Pension Security (afka ingiriiska ayuu ku qoran yahay)
Caafimaadka iyo badbaadada shaqada
Qofka shaqo bixiyaha ahi waa in uu ka baaraan dago shaqaalihiisu goobta ay ka shaqaynayaan jawigeeda xaaladdeed, amniga shaqada qawaacideeda iyo sidoo kale makiinadaha iyo qalabka qaabka loogu shaqaynayo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in shaqo bixiyuhu galo caymiska shilalka, camiskaas oo ka mag-dhabaya shaqada dhexdeeda wixii shilal ah oo ka dhaca iyo cudurada xirafadaha shaqadu shaqaalaha u keenaan ama dadkooda ehelka u ah qofka shaqaalaha ah khasaaraha iyo waxyeelada loo sababo ama loo geeysto ee soo gaarta.
Caafimaadka iyo badbaadada shaqada ee goobaha shaqada (afka finnishka ayuuy ku qoran yahay)
Hawlaha caafimaadka iyo badbaadada shaqada (afka ingiriiska ayuuy ku qoran yahay)
Dhib ma kaa haystaa shaqo bixiyahaaga?
Dhibaatooyinka suurtagal noqon kara sida mashahar bixinta ama shuruudaha shaqada dhexdeeda ah waa in marka hore aad kala hadasho shaqo bixiyaha. Inta badan dhibaatooyinka waxaa lagu dhammeeyaa ka wada hadal.
Dadka shaqaalaha ah waxay lee yihiin wakiilo goobta shaqadaada jooga kuwaas oo loo yaqaan (luottamusmies) ninkii la aaminay iyo (työsuojeluvaltuutettu) kii u xil saarnaa caafimaadka iyo badbaadada shaqada. Labadaas nin ayaa waxaad ka helaysaa talo iyo caawimaad, markaad uga baahato. Ninkii la aaminay ee goobta shaqadaad joogaa wuxuu sida caadiga ah u adeegaa dadka iskaashatada shaqaalaha ku jira oo xubnaha ka ah, laakiin waxaa haboon in aad u sheegato wixii dhib ah oo goobta shaqada kaa haysta, xataa haddii aadan xubin ka ahayn iskaashatada shaqaalaha.
Haddii dhibkii uu bixi waayo oo arimuhu hagaagi waayaan shaqo-biyahaaga adigoo la hadlay ka bacdi, waxaad la xiriirtaa hay'adaha hoos ku qoran ama urur iskaashato shaqaale ah ku jir ama ha ku jirin la xiriir qolyahan. Mar kastana arintaada gaarsii oo u sii gudub hadba liiska kuwaa la xiriirtay kuwa ku sii xiga, haddii qoladii hore ay wax kuu qaban weydo.
Qofkii xubin ka ah ama ku jira iskaashatada shaqaalaha saan ha sameeyo
Koow ha la xiriiro goobta uu ka shaqeeyo ninka arimaha shaqaalaha lagu aaminay ama ninka isagu u qaabilsan caafimaadka iyo badbaadada shaqada
Labo ha la xiriiro xafiiska magaaladiisa ee iskaashitada shaqaalaha uu ku jiro ama ha waco nambarkooda talo-bixinta
Qofkii aan xubin ka ahayn oo ku jirin iskaashatada shaqaalaha saan ha sameeyo
Koow ha la hadlo qof meesha kala shaqeeya oo khibrad leh ama goobta uu ka shaqeeyo ninka isagu u qaabilsan caafimaadka iyo badbaadada shaqada
Labo ha la xiriiro wakaalada fayo-dhawrka iyo badbaadada shaqada iyo shaqaalaha
Xafiiska magaaladiisa dadweynaha ka caawiya dhinacca sharciyada
Ururada iskaashada shaqaalaha xarunta daladda u ah ee loo yaqaan SAK taleefankooda lacag la'aanta ah oo talo-bixinta dhinacca heshiisyada shaqada siiya dadka ajaanibta ah ee dalkan u soo guuray waa 0800 414 004 wuxuuna shaqeeya Isniinta ilaa iyo Khamiista saacaddaha 9–11 iyo 12–15. Looyarada ama qareenada waxaad kula xiriiri kartaa oo su'aalahaaga sidoo kale ku weydiin kartaa e-mayl ahaan, waana kan e-maylkoodi workinfinland@sak.fi.
Wakaalada fayo-dhawrka iyo badbaadada shaqada iyo shaqaalaha taleefankooda talo-bixintu waa 0295 016 620 Isniinta ilaa iyo Jimcaha saacaddaha 8–16.15.
Wakaalada fayo-dhawrka iyo badbaadada shaqada iyo shaqaalaha taleefankooda talo-bixinta
Xafiiska dhinacca sharciyada dadweynaha ka caawiya halka laga helo ka eego (wuxuu ku qoran yahay websit-ku luuqadda afka finnishka)
Booliska: Samaynta ama gudbinta dacwad denbi ah (wuxuu ku qoran yahay websit-ku luuqadda afka finnishka)
Booliska: Samaynta ama gudbinta dacwad denbi ah (wuxuu ku qoran yahay websit-ku luuqadda afka ingiriiska)
Xuquuqqaha qofka shaqaalaha ah lee yahay iyo waajibaadyada saaran (wuxuu ku qoran yahay websit-ku luuqadda afka finnishka iyo ingiriiska iyo af soomaali)
Ka ganacsiga dadka iyo shaqooyinka la isku khasbo (wuxuu ku qoran yahay websit-ku afka finnishka iyo ingiriiska iyo af soomaali)
Warbixino xirfad-xirfad u qoran oo shaqada ka hadlaya iyo ururada iskaashatooyinka shaqaalaha
Ururada iskaashitooyinka shaqaalaha
Warbixino ku saabsan xirfado shaqo oo kala duwan ururadooda shaqaalaha (wuxuu ku qoran yahay websit-ku afka finnishka iyo ingiriiska)
Wakaalada fayo-dhawrka iyo badbaadada shaqada iyo shaqaaluhu waxay daabacdaa oo soo saartaa sanad kasta miraha la beerto dadka gura oo ka shaqeeya warbixin kooban oo shuruudaha shaqadooda laga rabo ku saabsan iyo mushaharooyinkoodu shax ay u dajiyeen oo luuqado badan ku qoran.
Shaqaalaha miraha gura shuruudaha laga rabo shaqadooda (wuxuu ku qoran yahay websit-ku afka finnishka iyo ingiriiska)
Xog ku saabsan adeegyada xirfadaha iyo Adeegyada xirfadaha ee ururada iskaashitooyinka shaqaalaha ee PAM (wuxuu ku qoran yahay websit-ku afka ingiriiska)
Xirfadaha shaqooyinka dhismaha
Xog ku saabsan xirfadaha shaqooyinka dhismaha iyo Ururka shaqaalaha ee dhismaha (waxay ku qoran tahay warbixinta afafka ingiriiska, ruushka, istooniya iyo boolandiiska)
Xirfadaha shaqooyinka korontada
Xog ku saabsan xirfadaha shaqooyinka korontada iyo ururka iskaashatada shaqaalaha ee koronto-yaqaanada (waxay ku qoran tahay warbixinta afafka ingiriiska, istooniya, boolandiiska, ruushka, romaaniga iyo turki)
Xirfadaha shaqooyinka warshadaha teknoolajiyada
Xog ku saabsan xirfadaha shaqooyinka biraha- iyo warshadaha teknoolajiyada iyo Ururka shaqaalaha ee shaqooyinka biraha dadka ka shaqeeya (waxay ku qoran tahay warbixintu afka ingiriiska iyo ruushka)
Hay'addaha bobliga ah
Xog ku saabsan xirfadaha shaqooyinka hay'addaha bobliga ah iyo Xirfadaha shaqooyinka ee bobliga ah iyo kuwa baraaraha horumarka shaqeeya ururkooda iskaashatada shaqaalaha ee JHL (waxay ku qoran tahay warbixinta afka finnishka, ingiriiska, ruushka, istooniyaanka iyo isbaanishka)
Ogolaanshaha sharcigaa ee aad u baahan tahay
Jinsiyadaha wadamada EU-da iyo Island, Liechtensti, Noorweey iyo Iswiisarlanad dadka u dhashay waa ka shaqayn karaan oo waxay ka dalban karaan Finland dhexdeeda shaqo si madax banaani ah ugu badnaa mudo saddex bilood ah. Mudadaas saddexda bilood ah ka bacdi waa in ay is diiwaan geliyaan oo xaqqa ay u lee yihiin daganaanshahooda soo sheegaan, laakiin si gaar ah daganaashaha shaqaalaha uma aysan baahna.
Is diiwaan gelinta aawadeed qofka shaqaalaha ah waa in uu tago sal-dhigga booliska. Is diiwaan gelinta waxaa lagu samayn karaa sidoo kale kumbuyuutar ahaa ciwaanka website-kana waa enterfinland.fi, laakiin markaa halkaas iska diiwaan geliso ka dib waa in aad aado sal-dhig boolis si laguu aqoonsado inaad adiga tahay.
Xuquuqda daganaanshahaaga markaad diiwaan geliso waxay shaqaynaysaa oo jiraysaa ilaa iyo intii wakhti ah oo la doono, haddii aan la kansalin oo dib loola noqon. Shan sano ka bacdi qofka shaqaalaha ah waxaa la siin karaa oo loo ogol yahay xuquuq daganaansho oo abadiyo ah.
Ogolaanshaha sharciyada ee ajaaninbta (waxay warbixintu ku qoran tahay afka finniska)
Ogolaanshaha sharciyada ee ajaaninbta (waxay warbixintu ku qoran tahay afka ingiriiska)
Jinsiyadaha wadamada EU-da is diiwaan gelintooda internetka ay ka samayn karaan (waxay ku qoran tahay warbixintu afka finnishka iyo ingiriiska)
Wadamada ka baxsan EU-da jinsiyadahoodu waxay u baahan yihiin sida caadiga ah inay wadankan ka shaqeeyaan ogolaansho sharci ah oo ay dalka ku daganaadaan. Ka hor inta aadan helin ogolaansho sharci ah oo aad dalka ku daganaato, waxaa khasab kugu ah in aad Finland marka hore ka hesho shaqo.
Ogolaanshaha sharciga lagu dalbado codsigiisa waxaa geeysanaysaa dawladda Finland safaaradaheeda dibadda ku yaal ama dalka dhexdiisa ayaad ka xeraysan oo waxaad codsiga geeysan sal-dhigyada booliska. Ogolaansho sharci ah oo aad dalka ku daganaato codsigiisa waxaad u soo xeraysan kartaa sidoo kale qaab kumbuyuutarka aad ka xeraynayso ciwaanka aad ka xeraysanaysaana waa enterfinland.fi.
Sida caadiga ah ogolaansho sharci ah oo aad dalka ku daganaanayso waxaa haboon inaad dalka dibaddiisa intaad joogto dalbato, ka dibna aad xagaas ku sugto inta aadan Finland imaanin. Sharci daganaansho ah oo in dalkan laga shaqaynayo lagu qaatay oo shardigu sidaas ahaa, waxaa qofka ajnabigaa looga baahan yahay in nolol maalmeedkiisu meel saaran yahay oo ay lacagi soo gasho.
Waxaa ogolaansho daganaansho sharci ah la'aantiis Finland ka shaqayn kara tusaale ahaan turjubaanada, macalimiinta iyo xirfadleeyda borofishinaaalka ah ee isboortiga cayaartooyga ah, haddii shaqada ay qabanayaan tahay mid loogu yeeray ama heshiis ku salaysan mudo ugu badnaan saddex bilood ah tahay. Sidoo kale kuwa iyagu gura miraha waxay dalkan ka shaqayn karaan ugu badnaan saddex bilood mudo gaaraysa iyagoon ogolaansho sharci daganaansho ah haysan. Qofka shaqaalaha ah waa in uu markaas xataa haysto baasaboor shaqaynaya iyo fiise dal ku gal ah, haddii ay jinsiyadiisu tahay wadamada uu waajibka inay fiise soo qaataan ah saaran yahay.
Xafiiska waaxda socdaalka ee imagarayshanka: Ka shaqaynta Finland (waxaa warbixinta website-kani ku qoran tahay afka finnishka)
Xafiiska waaxda socdaalka ee imagarayshanka: Ka shaqaynta Finland (waxaa warbixinta website-kani ku qoran tahay afka ingiriiska)
Wasaaradda arimaha dibadda: Xog ku saabsan fiisaha (waxaa warbixinta website-kani ku qoran tahay afka finnishka)
Wasaaradda arrimaha arimaha dibadda: Xog ku saabsan fiisaha (waxaa warbixinta website-kani ku qoran tahay afka ingiriiska)
Ogolaanshaha daganaanshaha sharciga ah ee aad qaab kumbuyuutarka ah ku dalban karto codsigiisa (waxaa warbixinta website-kani ku qoran tahay afka finnishka iyo ingiriiska)
Nambarka aqoonsiga shakhsiga iyo is diiwaan gelinta inaad dalka degan tahay
Dadka dalkan Finland ugu soo guura inay si rasmi ah oo abadiyan ah ama si kumeel gaar ah ugu noolaadaan waxay ka dalban karaan nambarka aqoonsiga shakhsiga ee fiilaandeeyska ah xafiiska diiwaan gelinta ama rajiistarayshanka. Nambarka aqoonsiga shakhsiga waxaad dalban kartaa sidoo kale isla marka aad ogolaanshaha daganaanshaha sharci ee dalka dalbanayso ama marka aad diiwaan gelinayso xaq u lahaanshahaaga inaad dalkan ku noolaato ah sida dadka EU-da jinsiyadoodu tahay.
Marka aad magaalada aad dagan tahay iska diiwaan geliso xafiiskeeda diiwaan gelinta dad weynaha, waxaa laguu aqoonsanayaa inaad tahay qof ku nool degmadaas. Xafiiska diiwaan-gelinta dad weynuhu wuxuu sidoo kale degmadooda diiwaan geliyaa dadka Finland sida rasmiga ah ugu soo guuray. Dadka degmada laga diiwaan geliyey waxay xaq u yeelanayaan inay isticmaalaan tusaale ahaan adeegyada sooshalka- iyo caafimaadka ee degmada.
Xafiiska diiwaangelinta dad weynaha: Diiwaan-gelinta dadka ajaanibta ah (wuxuu ku qoran yahay website-kani afka finnishka)
Xafiiska diiwaangelinta dad weynaha: Diiwaan-gelinta dadka ajaanibta ah (wuxuu ku qoran yahay website-kani afka ingiriiska)
Kaarka Kela-du wuxuu muujinayaa inaad ka tirsan tahay oo ku jirto caymiska buktada ee Finland dadka xaqqa u leh. Xafiiska Kela-da waxaad si fudud uga dano dhamaysan kartaa, haddii aad lee dhahay nambarka aqoonsiga shakhsiga ee fiilaandeeyska ah.
Faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan caymiska bulshada Finland ee dawladdu arimahooda dhaqaaale balan qaaday waxaad ka helaysaa xafiiska Kansaneläkelaitos oo loo soo gaabiyo Kela. Xafiiska Kela wuxuu xafiisyo ku lee yahay Finland oo dhan.
Kela: Geediga u soo guurka Finland (waxaa warbixintu ku qoran tahay afka finnishka)
Kela: Geediga u soo guurka Finland (waxaa warbixintu ku qoran tahay afka ingiriiska)
Barnaamijka la qabsiinta dalka
Barnaamijka la qabsiinta dalka ama dagaameeynta waxaa haddii loo baahdo sidoo kale loo samayn karaa dadka kale ee iyaguna ah kuwo dalkan u soo guuray, sida ardayda ama dadka iyagu ilmo ay dhaleen guriga ku haya.
Daraasaynta biloowga hore ah ujeedada laga lee yahay waxa ay tahay in tusaale ahaan qofka ajnabiga ah ee dalkan u soo guuray la eego waxbarashadiisa, khibraddihiisa shaqo iyo luuqaddaha uu garanayo oo ku hadlo. Barnaamijaka la qabsiinta dalka dhexdiisa waxaa lagu heshiiyaa, sida qofka ajnabiga ah ee dalkan u soo guuray uu dalkiisan cusub ee uu ku noolaanayo u dhex geli lahaa, luuqadda dalka u baran lahaa, u dhamays tiri lahaa aqoontiisa xirafadeeda iyo sidii uu u heli lahaa xoggaha warbixinaha ah ee uu u baahan yahay iyo aqoon. Barnaamijaka la qabsiinta dalka waxaa dajiya degmada ama xafiiska shaqada- iyo tabta nolosha loo la soo baxo iyo qofka ajanabiga ah laftigiisa ayaa si wada jir ah isula dajiya barnaamijka.
Mudada lagu dhex jiro barnaamijaka la qabsiinta dalka waxaa qofka ajnabiga ah ee dalkan u soo guuray la siiyaa lacagta caawimaada ee suuqqa shaqada iyo haddii uu u baahdo caawimaadaha nolosha ee lacagaha sooshalku bixiyo.
Xog war ah oo ku saabsan barnaamijka la qabsiinta dalka (warbixntu waxay ku qoran tahay afka finnishka iyo ingiriiska iyo afka soomaaliga)
Xafiiska shaqada- iyo tabta nolosha loo la soo baxo: Barnaamijaka la qabsiinta dalka (warbixntu waxay ku qoran tahay afka finnishka)
Xafiisyada shaqada- iyo tabta nolosha loo la soo baxo: Waraysiga hore ee daraasaynta ah iyo barnaamijka la qabsiinta dalka (waxay ku qoran tahay warbixinta afka ingiriiska)
Shahaadooyinka oo la soo aqoonsado
Soo aqoonsashada shahaadada waxaa loola jeedaa in laga gaaro shahaadadaada go'aan ah sidee ayeey uga shaqaynaysaa shahaado dibadda lagu soo qaatay oo loogaga heli karaa Finland dhexdeeda shaqo ama waxrasho. Aqoonsashada shahaadadu waa lacag waxaana laga dalbadaa hay'adda waxbarashada ee la yiraahdo Opetushallitus. Markii aad dalbanayso waxbarasho, lagaagama baahna in shahaadadaada la soo aqoonsado.
Aqoonsashada shahaadada (warbixintu waxay ku qoran tahay afka finnishka)
Aqoonsashada shahaadada (warbixintu waxay ku qoran tahay afka ingiriiska)
Luuqaddaha Finland waa afka finnishka, taas oo ay ku hadlaan una ah af afkoodi hooyo 90 % bulshada dalkan, iyo afka iswidhishka, taas oo ay ku hadlaan 5 %. Afka finnishka iyo luuqadda iswidhishka koorsooyinkooda waxaa soo qaban qaabiya Finland dhexdeeda iskuulo machadyo ah iyo ururo. Xafiiska shaqada- iyo tabtaa nolosha loola soo baxo dadka macaamiisha ka ah ayaa dalban kara koorsooyinka luuqadda, waxayna sidoo kale ka codsan karaan iyagoo xafiiskaas TE-toimisto u maraya.
Warbixino ku saabsan koorsooyinka luuqadda oo luuqado kala duwan ku qoran waxaad tusaale ahaan ka helaysaa.
Linkiyo kale oo faa'ido u leh dadka Finland inay ka shaqaystaan u yimid
Kela-da iyo xafiiska cashuuraadka barta adeegooda laga helo In To dadka Finland u yimid inay ka shaqaystaan waxay ku yaaliin Helsinki. Barta adeegyada waxaad ka helaysaa xoggo warbixin ah oo ku saabsan Finland sistamkeeda damaanadaha sooshalka, cashuuraadka iyo hawl-wadeenada u shaqeeya dadka wadanka u soo guuray arimo ku saabsan.
In To (warbixinta website-kani waxay ku qaoran tahay afka finnishka)
In To (warbixinta website-kani waxay ku qaoran tahay afka ingiriiska)
Xafiiska shaqada- iyo tabta nolosha loola soo baxo boggaan waxaa ka helaysaa warbixin duuduuban oo loogu talogalay dadka Finland inay ka shaqaystaan u yimid.
U soo shaqo taga Finland (warbixinta website-kani waxay ku qaoran tahay afka finnishka)
U soo shaqo taga Finland (warbixinta website-kani waxay ku qaoran tahay afka ingiriiska)
Xarunta caafimaadka shaqada iyo shaqaalaha boggaan waxaad ka helaysaa warbixin aasaasi ah oo ku saabsan sida shaqooyinka fiilaandeeysku yihiin waxayna warbixintu ku qoran tahay 13 luuqadood oo kala gedisan.
Ka shaqaynta Finland dhexdeeda – waa warbixino loogu talogalay dadka dalkan usoo guuray
Infopankki waxaad ka helaysaa warbixino caadiyo oo dhab ah oo dadka ajaanibta loogu talogalay warbixintu waxay ku qoran tahay 12 luuqadood oo kala gedisan.